Hitkii weynaa ee 2015 Mad Max Wasteland - Madadaalo
Hitkii weynaa ee 2015 Mad Max Wasteland
Maxaa ku yaal Mad Max Wasteland
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan Mad Max Wasteland
Wax qiyaas ah inta ay kasbatay?
Goorma Mad Max: Waddada Fury waxaa la sii daayay 2015, waxay ahayd mid aad u wanaagsan. Kaliya maahan in ay si fiican u soo bandhigtay xafiiska sanduuqa, laakiin sidoo kale waxay heshay faallooyin wanaagsan oo ka yimid dib-u-eegayaasha iyo daawadayaasha filimada, iyadoo qaar ay ku tilmaameen mid ka mid ah filimada ugu wanaagsan ee abid la duubay. George Miller wax-u-qoray, la-soosaaray, oo agaasimay Mad Max: Fury Road, 2015 Filim ficil-Raabbo ka dambeeya oo Australiyaanka ah. Shaashada shaashada, Miller waxa uu la shaqeeyay Brendan McCarthy iyo Nico Lathouris. Qaybta afraad ee shirkadda Mad Max, iyo sidoo kale dib-u-eegistii ganacsigii.
Akhri wax dheeraad ah:- Weli miyaad maqashay Documentary Billie Eilish?
Badbaadiye la yiraahdo Max Rockatansky ayaa la afduubay oo loo qaaday Immortan Joe's Citadel by the War Boys, oo ah ciidan uu madax u yahay Joe, iyadoo dunidu ay ku soo degto dhul saxare ah taas oo ay sabab u tahay burburka bulsheed ee ka dhashay dagaalka kheyraadka. Max waa la xidhay waxaana lagu qasbay inuu u adeego sidii bac dhiiga Nux, wiil dagaal murugo leh. Dhanka kale, mid ka mid ah taliyeyaasha Joe, Imperator Furiosa, ayaa loo soo diray hubkeeda dagaalka si ay u soo ururiso shidaal iyo ammo. Markii Joe uu ogaaday in shantiisa xaas ay la baxsanayaan, wuxuu hor kacayaa ciidankiisii ​​dabadood, isagoo caawimaad ka raadsanaya magaalada Gaaska iyo Beerta rasaasta ee u dhow.
Iyadoo Max uu ku xiran yahay baabuurkiisa, Nux wuxuu ku biiray ceyrsiga, dagaalkuna wuxuu u dhexeeyaa War Rig iyo ragga Joe. Marka laga reebo Nux, oo isku dayaya in uu naftiisa u huro si uu u burburiyo Rig, Furosa waxay u kaxaysaa duufaan bacaad ah, iyada oo ka baxsanaysa daba-galayaasheeda. Max ayaa ku guuleystey in uu baxsado oo uu qabto Nux, laakiin baabuurku wuu dhaawacmay.
Max wuxuu ogaadey Furosa hagaajinta Rig ka dib duufaanta, oo ay ku biireen xaasaskii: Karti, Cheedo, Toast, Dag, iyo Splendid Angharad, kan dambe oo uur leh ilmo Joe. Max wuxuu qaataa Rig, laakiin kaliya si murugo leh ayaa u oggolaanaya Furosa iyo haweenka inay ku biiraan isaga. Nux wuxuu u guntadaa Rig markii uu baxayo oo uu isku dayay inuu dilo Furosa, laakiin waa laga adkaaday oo la tuuray, halkaas oo uu ku qabtay ciidamada Joe.
Furiosa waxa ay fuushay xaafad ay gacanta ku hayaan kooxda rookaha ka dib markii ay ku gorgortantay gorgortan si ay u maraan ammaan. Markii ay kooxdu ogaatay in ciidanka Joe ku soo wajahan yahay, way soo jeedsadeen, iyaga oo ku qasbaya iyada iyo kooxda inay baxaan halka rookiinadu ay qarxiyeen gidaarada wabiga si ay u joojiyaan Joe. Sida baabuurka Joe uu ka gudbayo xannibaadda, Max iyo Furiosa waxay la dagaallameen wadayaasha mootada.
Joe wuxuu la qabsaday Rig-ga dagaalka, isagoo u oggolaanaya Nux inuu fuulo isagoo ujeeddadiisu tahay inuu mar kale weeraro Furosa; si kastaba ha ahaatee, wuu ku guuldareystay, si uu u niyad jabiyo Joe. Markii Riggu cararo, Angharad wuu siibtay isagoo isku dayaya inuu caawiyo Max waxaana si xun u garaacay baabuurkii Joe.
Akhri wax dheeraad ah:- Guriga Hooyooyinka ee Beverly Hills Xiliga 10
Fury Road waxa ay caan ku tahay tusmooyin dhab ah oo dhiirranaan leh, kuwaas oo siinaya xaqiiqo muuqaal ah oo aan laga helin inta badan kuwa hadda jira. Filimka afaraad ee Mad Max, dhanka kale, wuxuu ahaa ku dhawaad ​​gebi ahaanba firfircooni. Miller waxa uu ka hadlay qadarintiisa animation-ka Japan sida Akira iyo Ghost ee Shell ee waraysiga 2009 ee MTV.
Kahor inta uusan duubin filimka, Tom Hardy ayaa lagu eedeeyay inuu la qadeeyay Mad Max asalka ah oo uu helay ogolaanshihiisa. Hardy wuxuu xidhaa jaakad u dhaw mid la mid ah tan uu Gibson xidho ee Mad Max iyo taxanihiisii ​​ugu horeeyay, Mad Max 2: Warrior Road, ee Fury Road.
Waxa kale oo uu wadaa V8 Interceptor, kaas oo u dhigma midka uu wado Gibson qeybtii dambe ee filimkii hore iyo qaybta furitaanka ee labaad, inkastoo ay nasiib darro tahay. Mel Gibson wuxuu ag fadhiistay Miller ee furitaanka Fury Road, Miller ka dib wuxuu yidhi.
Soo noolee sharaftii murugada lahayd si aan waligeed loo arag. Lahaanshaha Mad Max Anthology oo dhamaystiran iyo markii ugu horeysay, Mad Max: Warrior Road & Mad Max: Beyond Thunderdome - Dhammaan 4K Ultra HD ee 11/16. https://t.co/qSNvtCLkJE pic.twitter.com/KffZ1Op5wY
- Filimka Mad Max (@MadMaxMovie) Oktoobar 8, 2021
Markii hore, Max iyo Furiosa waxay u diyaar garoobeen inay is dilaan, laakiin ugu dhakhsaha badan waxay abuuraan saaxiibtinimo aan fiicneyn iyo nooc ixtiraam labada dhinac ah. Miller wuxuu qirtay Wall Street Journal sanad ka dib markii ugu horeysay ee filimka in xiriirka ka dhexeeya labadiisa xiddig uu raacay waddo la mid ah, inkastoo aan lahayn cadho dilaa ah. Charlize ayaa sidoo kale ka hadashay arrintan, iyada oo u sheegtay Esquire in ay midba midka kale kaxeeyeen waalli.
Ka soo horjeedka ugu weyn ee Fury Road waa Immortan Joe. Toecutter ayaa lagu burburiyay filimkii hore, sidaas darteed waa wax aan macquul aheyn in uu yahay mid isku mid ah, laakiin jilaagu waa mid aan la isku halleyn karin. Hugh Keays-Byrne, oo ku sawiray ninka aasaasiga ah ee sawirka asalka ah ee Mad Max 1979, waa ninka ka dambeeya qurxinta iyo suxuunta sida Immortan Joe.
Tom Hardy ayaa shaaca ka qaaday inuu ku xiran yahay seddex filim oo kale oo Mad Max ah wareysi uu siiyay majaladda Esquire ee daboolka daboolka kaas oo la sii daayay wax yar ka hor bandhiga caalamiga ah ee Fury Road. Markii ay naqshadeeyeen sheekooyinka jilaha ee Fury Road, Miller iyo qoraagiisa Nico Lathouris waxay la yimaadeen agab ku filan laba qoraal oo dheeri ah, iyo sidoo kale buugaag majaajillo ah oo badan oo ay daabacday sumadda DC's Vertigo ku dhawaad ​​​​wakhtigii filimka la sii daayay.
Akhri wax dheeraad ah:- Waa maxay Nooca Sideeda ah ee La Kordhiyay ee Neceybka ah?
Mad Max: Fury Road waxa uu ka keenay $154.1 milyan gudaha Maraykanka iyo Kanada, iyo $221.3 milyan suuqyada kale ee wadarta guud ee caalamka oo dhan $375.4 milyan, marka loo eego miisaaniyada wax soo saarka ee $154.6–185.1 milyan. Waxay ahayd flop-ka xafiiska. Sida uu sheegay wariyaha Hollywood-ka, sawirka ayaa lunsaday inta u dhaxaysa $20 iyo $40 milyan oo doolar.
Mad Max: Fury Road wuxuu ku furmay Pitch Perfect 2 3,702 tiyaatar oo ku kala yaal Mareykanka iyo Canada, wuxuuna soo xareeyay maalintiisii ​​ugu horreysay $16.77 milyan, oo ay ku jirto $3.7 milyan oo uu soo xareeyay habeenkii Khamiista 3,000 oo tiyaatar. Filimkan ayaa soo xareeyay $45.4 milyan todobaadkiisa kowaad, isagoo kaalinta labaad ka galay Boxoffice-ka isagoo ka dambeeya Pitch Perfect 2 ($69.2 milyan).
Akhri wax dheeraad ah:- Bandhiga Prime Best 2021 oo dhamaystiran macluumaadka!
Dhaleeceyn dhowr ah iyo goobo lagu magacaabo Mad Max: Fury Road waa mid ka mid ah filimadii ugu fiicnaa ee 2015, waxaana loo codeeyay sawirka Rotten Tomatoes' ee ugu fiican 2015. Filimku wuxuu kaalinta koowaad ka galay qiimeynta filimka ugu wanaagsan ee Metacritic ee dhamaadka sanadka, iyadoo 58 naqdiye ay sheegeen inuu yahay sawirka ay jecel yihiin. sanadka. Sahan ay samaysay BBC-da 2016, Mad Max: Fury Road waxaa lagu qiimeeyay filimka sagaal iyo tobnaad ee ugu weyn qarnigii kow iyo labaatanaad. New York Times ayaa kaalinta sagaal iyo tobnaad ka gashay filimkii ugu fiicnaa qarnigi kow iyo labaatanaad ilaa hadda 2017. Majaladda Empire ayaa u magacawday filimkii ugu fiicnaa qarnigii kow iyo labaatanaad ee Janaayo 2020.
Warhammer 40,000: Darktide - Ugu dambeyntii wuxuu imaanayaa xilliga gu'ga 2022!
Yaa Ku Guulaystay Ciyaarta Xiddigaha Xiliga 29
TV -ga bilaashka ah ee ku qulqulaya internetka
maxaa bedeli doona tv cable
microsoft windows 10 arday bilaash ah
si toos ah uga bax khadka tooska ah ee internetka
daawo net filimo buuxa oo bilaash ah